को हुन्– गोदावरी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष उम्मेदवार राज घिमिरे ? - Everest Dainik - News from Nepal
को हुन्– गोदावरी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष उम्मेदवार राज घिमिरे ?
ललितपुर । कुनै ताका नायक बनेर फिल्मी क्षेत्र तताएका राज घिमिरेको पछिल्लो परिचय हो– समाजसेवी र राजनीतिककर्मी । समाजसेवाको बाटो हुँदै राजनीतिक यात्रा तय गरेका गोदावरीका घिमिरेको पछिल्लो नविन यात्रा हो– वडाध्यक्ष बन्ने । आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी गोदावरी नगरपालिका वडा ३ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् ।
१२ वर्षदेखि गोदावरी क्षेत्रमा सामाजिक काम गर्दै आएका घिमिरेले जनताको माग अनुसार वडाध्यक्ष बन्ने इच्छा राखेका हुन् । आफूले सामाजिक क्षेत्रमा गरेका काम देखेरै पार्टीले आफूलाई अघि सारेको उनको भनाई छ । ‘मैले गोदावरी क्षेत्रमा लामो समय काम गरे, समाजसेवीको रुपमा लामो समय खटिएकोले पनि पार्टीले मुल्यांकन गरेको छ,’ उनले सुनाए, ‘आफूले जहाँ सेवा गरिन्छ र दुःख भोगिन्छ त्यो ठाउँमा नेतृत्व गर्र्ने इन्छा हुने रहेछ ।’
फिल्मी क्षेत्र छाडेपछि उनले समाजसेवालाई सधैं मुलधारमा राखे । व्यक्तिगत जीवन छाडेर उनी लामो समयदेखि गोदावरीका स्थानीयको सेवा तल्लीन रहँदै आएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस स्थानीय तह चुनावबारे संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधनकाे तयारी
सालतिरको कुरा हो, घिमिरे २०५५ सालमा डालोमा दालमोट बदाम बेच्न हिड्थे । सित्तैमा ट्युसन पढाउथे, खेताला जानेलगायत अनेकन दुःख भोगेका छन् उनी । उनले किट्नी कलेजमा प्लस टु गरेका थिए । त्यतिबेला पढाई शुल्क बुझाउने रकम नभएर आमाको तिलरी र खड्खुलो बेचेका थिए । ‘१८ सयमा तिलरी र खड्खुलो बेचेर पढेको हुँ,’ उनले सुनाए, ‘त्यति गरेर पनि पढाइमा ‘टप’ भएको थिएँ ।’ घरको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक भएकाले पनि उनी प्लस टु भन्दा माथिको शिक्षा हासिल गर्न पाएनन् । पढाइ छाडेपछी उनी फिल्मी क्षेत्र र पाटन क्षेत्रमा ट्युसन पढाउने काम गर्थे । त्यहीँ शिलशीलामा फिल्मी क्षेत्रमा काम गर्न अवसर पाएपछि उनले बाटो मोडेका थिए ।
राज घिमिरेको पछिल्लो परिचय हो– समाजसेवी । समाजलाई सपार्ने र सम्मुन्त सपना बोकेर हिडेका छन् अहिले उनी । कोरोनाकालमा आफूले भोगेको दुःख बिर्सेर गरिबलाई सहयोगमा खटेका छन् । गोदावरी क्षेत्रमा सोलार बत्ती बाल्ने, सडक बनाउन पहल गर्ने, स्थानीयलाई प्रशासनिक कार्यमा झन्झट भएको थाहा पाए तुरुन्त गएर काम छिटो सकाउने पहल गरिदिने, बन्द सडक खुलाउन पहल गर्ने, किसानका समस्या हल गर्न पहल गर्ने, उपचार गर्न नसक्नेलाई आर्थिक सहयोग गर्नेलगायत थुपै कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।
कोरोनाकालमा दुःखीका सारथी बने
घिमिरे आपत्विपद्का बेला आफ्नो घरको काम छाडेरै जनताको घरदैलो पुगेर सहयोग गर्नमा दौडिए । कोरोना संक्रमणपछि सरकारले लकडाउन गरेको बेला उनले समाजमा ठूलो गुन लगाए । गरिब र असहायलाई खानेकुरा मात्रै दिएनन् आफ्नो कारलाई जनताको राहत सामग्री बोक्ने साधन बनाए ।
अहिले कोरोना संक्रमण करिब नियन्त्रणमा आइसकेको छ । तर कोरोना संक्रमण सुरु भएको करिब दुई वर्ष घिमिरेले कारको बाहिरपट्टी माइक झुन्डाएर माइकिङ गर्दै हिडे । कोरोना सचेतनाको सन्देश बाड्दै लगनखेलदेखि उनी गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिकाका विकट ठाउँहरुमा पुगे । दाल चामल, सेनिटाइजर, मास्क, औषधिलगायत सामग्री वितरण गरे ।
विपन्नलाई राहत प्याकेज नछुट्याउँदा उनीहरुलाई दैनिकी गुर्जान असहज भइरहेकोले आफू गाउँ गाउँ पुगेको उनको भनाई छ । उनले करिब १५० बोरा चामल, दश हजार पीस मास्क, दस कार्टुन साबुन, सेनिटाइजरलगायत सामग्री वितरण गरे ।
संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको भयले सबैजना घरभित्रै क्वारेन्टाइनमा बसेको बेला उनी राहत वितरणमा दौडिएका थिए । मनकारी सोचका नायक घिमिरे अहिले त्रासबीच गाउँगाउँमा राहत सामग्री बाड्दै हिडेका थिए । ‘घरभित्र आनन्दले बस्न पनि सक्थेंँ होला, तर विपन्नको बारेमा कस्ले सोच्ने, राजनीतिक दलको मात्रै कति आशा गर्नु, यस्तोेबेला परोपकारी काम गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले सुनाए ।
उनी गोदावरी नगरपालिकाका १ देखि ४, १०, १३ र १४ वडामा कोरोना संक्रमणको बेला निकै खटिए । ललितपुरको दक्षिणी भेगमा पर्ने भट्टेडाँडा र छपेली क्षेत्रमा समेत पुगेर राहत सामग्री बाँडे । उनी समाजकै भलो र सेवाको निम्ति वडाध्यक्ष बन्न लागेको बताए ।
हेटौडा उपमहानगरको मतपत्रमा ‘नो भोट’ लेखेको भेटियो
आगामी वर्षको बजेट कृषि उत्पादनमा केन्द्रीत गरिने छ : अर्थमन्त्री शर्मा
आजदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु
देश संकटमा पर्दा पनि सरकार गम्भीर भएन : प्रदीप ज्ञवाली
संसदमा विनियोजित बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता विधेयक पेश, यस्ता छन् प्राथमिकताहरु
३१७ पालिकाकाे नतिजा : कांग्रेस १४३, एमाले ९२ र माओवादी ६९ वटामा विजयी